दु:खद खबर- आफ्नै घरमा आरम गरीरहेका बुबाको अकालमय मृ’त्यु, छोरी र नातिनी गम्भिर घा’इते !! – Khabar28media
दु:खद खबर- आफ्नै घरमा आरम गरीरहेका बुबाको अकालमय मृ’त्यु, छोरी र नातिनी गम्भिर घा’इते !!
June 24, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
९ असार, खोटाङ । चट्याङ लागेर दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरी बास्तलाका ६९ वर्षीय अगमबहादुर राईको मृ’त्यु भएको छ । आफ्नै घरमा चिया पिइरहेका समयमा आज परेको चट्याङले उनको घटनास्थलमै मृ’त्यु भएको हो ।
चट्याङले राईकी छोरी ४५ वर्षीया तारा र नातिनी १४ वर्षीया रचना बेहोश भएको स्थानीय बासिन्दा नारायण राईले जानकारी दिए । घा’इते दुवैको सामान्यावस्था रहेको जनाइएको छ ।
घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङबजार र अस्थायी प्रहरी चौकी छितापोखरीबाट प्रहरी खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले बताए । श’व परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल दिक्तेल ल्याउने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
यो पनि -सामाजिक अभियानता ज्वाला संग्रौला यति बेला प’क्राउ परेका छन यस बिसयमा चर्चित बेक्ती हरुले समेत सामाजि क संजाल बाट आवाज उठाइ रहेका छन् जस्तै रबि लामि छाने भिम उपाध्याय ज्ञानेन्द्र शाही इशा गुरुङ धेरैले भनेका छन यदि ज्वालाको गल्ती भए कडा कारबाही गरियोस नत्र बितेका कुरा हरु लाई ल्याएर थप मुद्दामा अन्याय गर्ने काम बन्द गर्नु होस समेत भनेका छन् !
Jwala Sangroula ले यदि गल्ती गरेकी छन भने कानु न अनुसार कार्बाही गरियोस हैन भने तत्काल रिहा गरियो स कसैमाथी पुर्ब आ’ग्रहि भएर प’क्राउ गर्न पाईदैन । तर प्रहरी कार्यलयमै प्रहरी कै अगाडी आक्रमण गर्ने पुरै समुह लाई किन पक्रा उ गरिएन र कानुनी का’र्वाही गरिएन ? सरकारले पुर्ब आ’ग्रहि भएर कसैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छैन आ’क्रमण गर्ने अ’पराधी लाई छुट दिने अधिकार पनि छैन ज्वाला माथी आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी लाई तत्का ल प’क्राउ गरियोस ।
यो पनि: सुन्दैछु पाच बर्ष पुरानो विषय लाई पनि हति’यार बना’एको छ भनेर लोकतन्त्रमा बोल्नै नहुने भन्ने हुन्छ लोक तन्त्र को सुन्दरता नै आलोचना हो। आ’लोचनाले मानिस लाई सु’ध्रिन र सु’धार्न मद्धत गर्छ। नविन नेपाल देशको यो विषम प’रिस्थितिमा दिन दुखिलाई राहत दिने काममा व्यस्त भएको
ज्वाला सङग्रौलालाई कसैले दु’श्मनी ईगो लिएर फसाउने काम गरेको हो भने यो ग’लत हुने छ देश रोईरहेको बेला गरिव दुखिको लागि रात विहान नभनी ज्या नको प्र’वाह नगरी ज’नताको उनले के त्यस्तो ग’लत गरिन् देश यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो भ्र’ष्टहरु मौलाई रहेकाछन देश बन्न पर्छ स’मृद्ध हुनु पर्छ भ्र’ष्टचार हुनु हुदैन भन्दाक’स को टाउको किन दुखेको छ?
भिम उपाध्याय लेख्नु हुन्छ ज्वाला संग्रौला बहिनीले बिदेश मा बस्दा होस् कि स्वदेश फर्केर होस्, गरिब दु:खी जनता को साथमा रहने र उनीहरूको कष्ट निवारण गर्न समाज सेवामा खटिएको सबैले देखेका छन्। समाज सेवामाफिल्ड खटिनेका बिरूद्ध समाजको बदमासहरू जाई लाग्ने गरेको पनि यता आएर प्रष्ट देखिएकै छ। कतै कही केही भनाभन, झडप
भएको भए कानुन बमोजिम काम का’र्यवाही सबै लाई गर्नुपर्छ तर कार्यवाही गर्दा तारेखमा वा धरौटीमा छाडे र गर्ने परम्परामा पुलिस फोर्स लाग्नु नै जनताको नजरमा लोकप्रिय र उत्तरदायी भएको देखिने हुन्छ। कसैको दबाब मा वा होहल्लामा जसलाई प’क्रिहाल्ने, थुन्ने र दु:ख दिने नियत राखेर पुलिस फोर्सले कहिल्यै माया र जस पाउदैन।
अहिले ज्वाला संग्रौलालाई हिरासतमा लिएको समाचार बाहिरिएको छ। उनीसंग अबिलम्ब सोधपुछ गरेर, चाहिने वयान लिएर तुरून्तै रिहा गरेर कानुनी कार्यवाही अघि बढाउनु नै उचित हो, यसरी हिरासतमा राखिराख्न जरूरी छैन। समाज सेवा गर्नेहरूकै बिरूद्धमा अलोकप्रिय नेता हरू र तिनका पिछलग्गुहरू जाईलाग्ने गरेको तथ्य पुलिसले पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ।
नत्र जनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीप्रति जनताका समाज सेवकमाथिको गलत ब्यवहारलाई जनताले नै गलत नजरले हेर्दै जाने हुनाले यसबाट कसैको हित हुन सक्दैन। राज्यले कसैलाई थुन्नु बहादुरी हैन, अधिकारको दुरूपयोग हुन्छ। ननबेलेबल बाहेक सबै केसमा तारेखमा छाडेर कानुनी कार्यवाही गर्नु नै स्वच्छ पुलिस प्रशासनको कार्यशैली हुनुपर्छ। पुलिस शक्तिको दुरूपयोग हुनु भनेको शासन कबाडी भएको लक्षण भनेर बुझिन्छ।
तसर्थ हिरासतमा रहेकी ज्वालालाई तत्काल रिहा गर्न म अनुरोध गर्दछु। ननबेलेबल कसुरबाहेक कसैलाई थुनामा नराखियोस्। यस्तो गरिनु शक्तिको दुरूपयोग त हो नै, राष्ट्रिय श्रोतको दुरूपयोग पनि मानिन्छ।मुलुकमा पुलिस निरन्तर बद्नाम हुदै जानु पनि यस्तै अनपेक्षित पटक पटकका अविवेकी कार्यशैलीका कारण हुदै आएको छ। लोकतन्त्रमा पुलिसको छबि सुधार्न झन् जरूरी छ। नवनियुक्त गृहमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस्।
Previous Article एस्तो अवस्था हुँदा पनि भन्छन् ” सित्तैमा आएको भत्ता त लिन्न, अरु त परै जाओस ” ! सम्मानका लागि एक सेयर गरिदिनुहोस्
Next Article विवाहको २७ दिनमा र हस्यमय मृ’त्यु भएकी विष्णुको केसमा सनसनीपूर्ण खुलसा, घरमा हजारौंको भिड !! (भिडियो हेर्नुस्)